Tsy hita tany Venezoela i Luis Carlos Diaz, mpanao gazety nomerika · Global Voices teny Malagasy
Nivaha haingana dia haingana tamin'ny famotsorana azy ihany ny raharaha
Voadika ny 13 Marsa 2019 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Français, Italiano, русский, Deutsch, bahasa Indonesia, Nederlands, Español, македонски, Română , 繁體中文, Português, اردو, عربي, Shqip, বাংলা, Yorùbá, नेपाली, हिन्दी, 日本語, srpski, English
[Vaovao farany] Nitatitra mivantana avy eo i Luz Mely Reyes avy any an-tranon'i Díaz raha nisava ny tranon'i Diaz sy Soto ny ekipan'ny SEBIN ary naneho hevitra momba ity zava-nitranga ity ihany koa ny Fikambanan'ny Mpiasan'ny Gazety :
Nanatevin-daharana ilay fanentanana tamin'ny alàlan'ny tenirohy #DondeEstaLuisCarlos (Aiza ​​i Luis Carlos?) izay lasa lohahevitra malaza ao amin'ny tontolon'ny twitter any Venezoela amin'izao fotoana izao ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona sy ny fikambanana mpiaro ny fahalalaham-pitenenana hafa.
Mpanao gazety sady mpiaro ny zon'olombelona sy ny fahalalaham-pitenenana izay fanta-daza sy ankasitrahana indrindra ao Venezoela ary any ivelany i Díaz noho ny fanehoan-keviny sy ny tsikera nataony tamin'ny governemantan'i Nicolas Maduro. Niara-niasa efa hatry ny ela tamin'ny vadiny Naky Soto izay fanta-daza amin'ny fanehoan-kevitra ara-politika ihany koa izy ary namokatra lahatsary an-tserasera sy fandaharana tamin'ny onjam-peo mifantoka amin'ny resaka politika sy ny zon'olombelona ao Venezoela. Niasa ho mpanabe sy mpampiroborobo ny famoronana ny sehatry ny fampielezam-baovaon'olo-tsotra sy ny tetikasan'ny fampitam-baovao tsy miankina ihany koa izy. Anisan'ny vondrom-parahamonina ato amin'ny Global Voices mihoatra ny folo taona ihany koa i Díaz .
Vao andro vitsivitsy mialoha ny nanjavonany, nampiseho ny lahatsary iray momba ny fandaharana vao haingana nataon'i Diaz ny fandaharan'ny fampahalalam-baovaom-panjakana Con el Mazo Dando. Nilaza ny mpanolotra ny fandaharana, Diosdado Cabello, mpanao politika, fa nanampy tamin'ny fanaparitahana ny fahatapahan'ny herinaratra manerana ny firenena izay namela ny Venezoeliana niaina tao anaty haizina nandritra ny 24 ora ny 7 sy 8 Martsa i Diaz.
Raha nandeha tsy nisy vaovao marim-pototra ny fotoana dia nanatevin-daharana ny fanentanana izay niatomboka tamin'ny fikarohana tao amin'ny foiben-toeran'ny Sampa-pitsikilovana (SEBIN) ny Fikambanan'ny Mpiasan'ny Gazety (amin'ny teny Espaniola, SNTP). [Vaovao farany: nilaza izy ireo tatỳ aoriana fa nohazonina mialoha fotoam-pitsarana i Diaz ]: